Waa Kuma Tababaraha Cusub Ee Man United Loo Dhiibay? Maxaa Kala Dhaxeeya Thomas Tuchel & Jurgen Klopp? - Laacib
HomeWararka CiyaarahaWaa Kuma Tababaraha Cusub Ee Man United Loo Dhiibay? Maxaa Kala Dhaxeeya Thomas Tuchel & Jurgen Klopp?
Waa Kuma Tababaraha Cusub Ee Man United Loo Dhiibay? Maxaa Kala Dhaxeeya Thomas Tuchel & Jurgen Klopp?
November 25, 2021 Saed Mohamed
Manchester United ayaa heshiis la gaartay tababare Ralf Rangnick si uu u noqdo tababarhooda ku meel gaarka ah inta ka harsan xilli ciyaareedkan.
Ninka reer Jarmal oo 63 sanno jir ah ayaa lagu waramayaa inuu heshiis lix bilood ah u saxiixayo Red Devils ka dib markii ay kooxda ceyrisay tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Rangnick ayaa loo arkaa nin aragti dheer u leh kuada cagta, islamarkaana sumcad weyn ku sameystay dalkiisa Jarmalka.
Waxaa la sheegayaa inay wax badan ka barteen dhanka taatikada tababarayaaasha Premier League ee Jurgen Klopp iyo Thoms Tuchel iyo kan Bayern Munich Julian Nagelsman.
Waxaa lagu naaneesaa ‘The Professor’, waxa uu ka mid yahay tababarayaasha ku caan baxay kubada raacashada badan ee Gegenpressing loo yaqaano ee uu Klopp ka hergeliyay Liverpool.
Saameyntiisa taatikadaan waxaa laga dareemay kubada casriga ah iyadoo kooxo badan ay hergeliyeen falsafadiisa.
Rangnick wuxuu bilaabay waayihiisa tababarenimo isagoo 25 sanno jir ah sannadkii 1983, ka dib markii uu ku fashilmay inuu ciyaaryaahn noqdo.
Laakiin falsafadiisii waqtigaas waxay ka soo horjeeday taatikadii waqtigaas caanka aheyd iyadoo xulka qaranka Jarmalka uu ku ciyaarayay 3-5-2 iyo nin xirasho.
Xulkii Galbeedka Jarmalka ayaana guulo ku gaaray taatikadaas iyagoo ku guuleystay Koobkii Adduunka ee 1990 ka dib markii ay finalka gaareen 1986kii.
Laakiin Ralf kama quusan in falsafadiisa uu ka hergliyo kubada cagta Jarmalka. Sannadkii 1997kii wuxuu helay shaqadiisii ugu horeysay ee tababarenimo isagoo qabtay kooxda Ulm 1846, isagoo ku hogaamiyay koobka horyaalka heerka afaraad ee Jarmalka.
Sannad ka dib wuxuu ka soo muuqday TV Jarmal ah isagoo ku soo labistay suut madow islamarkaana shaaciyay falsafadiisa kubadeed,
Warbaahinta Jarmalka waxay u bixiyeen “German Professor”, laakiin kama aheyn amaan ee waxay ka aheyd kajan iyo inay ku maadeystaan fekerkiisa iyagoo u arkayay wax aan micno laheyn.
Laakiin maanta falsafadiisa waxaa loo yaqaanaa Gegenpressing oo ah in kooxda ay durbadiiba raacasho badan sameyso marka ay kubada dhumiso si ay ugu qasbaan kooxda ka soo horjeeda inay qalad baas sameeyaan.
Waa taatiko uu si weyn u hergeliyay Jurgen Klopp markii uu joogay Borussia Dortmund iyo haatan uu joogo Liverpool.
Tababaraha Liverpool ayaa sheegay in Rangnick uu yahay tababaraha ugu fiican ee Jarmal ah.
Rangnick oo ka hadlayay falsafadiisa Gegenpressing ayaa yiri: “Waa mid aad u sahlan.
“Waa qaabka ay u ciyaarayeen Borussia Dortmund iyo Liverpool markii uu macalin u ahaa Klopp.
“Waxaan jecel nahay inaan si xamaasad leh kubada u raacano oo cadaadis saarno kooxda naga soo horjeeda. Marka aan kubada heysano ma jeclin inaan baas micno darro ah sameyno.
“Goolhayaha waa inuusan kubada taabanin wax badan. Madaama uu goolhayaha yahay ciyaaryahanka kaliya ee hal boso jooga waa inaan xaqiijino inaysan cagtiisa ku badinin kubada.
“Gegenpressing waa kubad degdeg ah, waa weerar joogta ah, rogaalcelis iyo raacasho badan oo xamaasadeysan, waxay xiiso u yeeshaa kubada cagta.”
Ka soo bilow 2001 ilaa 20104 wuxuu tababare u ahaa Hannover isagoo u soo saaray Bundesliga.
Ka dib markii uu seegay inuu noqdo caawiyaha tababaraha xulka Jarmalka, waxa uu shaqo ka helo kooxda Schalke.
Schalke waxay xilli ciyaareedkaas ciriirisay Bayern Munich iyadoo kaalinta labaad ku dhameysatay xilli ciyaareedka horyaalka Bundesliga.
Rannick ayaa tababare ka noqday kooxda Hoffenheim sannadkii 2006 ka dib markii laga ceyriyay Schalke oo wajahday natiijooyin xun xun.
Hoffenhein ayay aheyd kooxdii uu guulaha waa weyn ku gaaray isagoo ka soo saaray horyaalka heerka seddexaad islamarkaana keenay horyaalka Bundesliga.
Wuxuu ka tagay kooxda iyagoo Bundesliga ka ciyaareysa wuxuuna ku laabtay Schalke oo uu dareemay inay shaqo qabyo ah ka taalo.
Wuxuu ku guuleystay German Cup, wuxuu kooxda ku hogaamiyay semi-finalka Champions League ka hor inta uusan daal dartiis isaga casilin shaqada sannadkii 2011.
Rangnick sannad ayuu fasax ka qaatay kubada cagta laakiin wuxuu ku biiray mashruuc xusub oo uu ku maareynayo kooxaha Red Bull ee Leipzig, Salzburg iyo New York isagoo ka noqday agaasime shirkada.
Intii uu maamulka shirkada hayay wuxuu Leipzig ka dhigay koox ka soo kacda heerka afaraad islamarkaana ka mid noqota afarta kooxood ee ugu waa weyn Bundesliga iyagoo si joogta ah uga qeyb gala Champions League.
Rangnick ayaase ku soo laabtay shaqada tababare isagoo kooxda tababare u noqday intii u dhaxeysay 2015-16 iyo 2018-19, laakiin wuxuu ka doorbiday doorkiisii agaasime.
Wuxuu haatan la taliye u yahay kooxda Ruushka ee Lokomotiv Moscow ka dib markii ay AC Milan ku guuldareysatay inay soo xerogeliso.
Laakiin shaqada Man United ayaa ah mid aan la diidi karin madaama ay ka mid tahay kooxaha ugu waa weyn dunida.
Miyir abdi says:
Inta ooga danbaysa hadayna ku jirin ma aqriyeen postiga macasalaama🤚🤚.
united oo heshay tababare ay isku falsafad yihiin tababaraha lifarbuul si lifarbuul layskaga celiyo oo kaliya hhhhh waxba idiin tarmaayaan waxaasi unitedeey
Woo ila wanagsna yahay ninkan ciyow hala dhamestiro ninkan Hishiskisa
Horta Manchester United see wax kayihiin war ciyaartoy keensada meesha odeyga qanjirada buuran oo insoogada ciyaartoyda kaas iska ceyriya